आइफा विवाद व्यर्थ छ, सरकारले सुरक्षाको लागि साथ दिएको हो, पैसाका लागि हैन
Tuesday,2Jul, 2019 1:33 PM
विहिबार मन्त्रिपरिषदको बैठकले इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी ‘आइफा’ अवार्डको कार्यक्रम नेपालमा गर्ने घोषणा गरेपछि कलाकारहरुबीच एकखालको विवाद शुरुभएको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट ‘आइफा’ अवार्डमा सहयोग गर्ने संघसंस्थामा आयोजक पर्यटनबोर्ड र सह–आयोजक काठमाडौं महानगरपालिका रहनेछन् भन्ने निर्णय भएपछि बाहिर बिरोध शुरु भएको हो । नेशनल फिल्म अवार्डमा चासो नदिएको सरकारले आफै आयोजक भएर भारतीय चलचित्रको फिल्मी अवार्ड कार्यक्रमका लागि करोडौ बजेट छुट्याएको भन्दै कतिपय चलचित्रकर्मी रुष्ट बनेका छन् । आइफा अवार्डमा देखिएको विवाद र वास्तविकता के हो त ? के साच्चै सरकारले नेशनल अवार्डलाई बेवास्ता गदै, आइफाका लागि करोडौ सहयोग गरेकै हो त ? यस बिषयमा प्रष्ट पार्न चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईसँग चक्रपथ डटकमको टिमले गरेको कुराकानी ।
केही दिनदेखि नेपालमा आइफा अवार्डको चर्चा शुरुभएको छ, चर्चासँगै चलचित्रकर्मीहरुबीच एकखालको विवादमा उत्रिन थालेको प्रष्ट देखिएको छ, आइफा अवार्डको बिषयलाई लिएर चलचित्र क्षेत्रमा देखिएको विवाद के हो ?
आइफाले म यो कुर्सिमा नियुक्त भएर आएको तेस्रो चौथो दिनमा पत्राचार गरेको थियो । आफनो २० औ संस्करणको आईफा अवार्ड हामी नेपालमा गर्न चाहन्छौ भन्ने उदेश्यको ईमेल आइफाको सिइओले चलचित्र विकास बोर्डमा पठाउनुभएको थियो । नेपाल सरकारले इजाजत दिन्छ भने हामी गर्न चाहन्छौ भन्ने आशयको थियो उक्त ईमेल । हामीले तपाईहरु आउनुहोस्, हामी सरकारसँग भेटाईदिन्छौ भनेर त्यो इमेल रिप्लाइ ग¥यौ । हामीले रिप्लाइ पठाएपछि उहाँहरुको टिम काठमाडौ आउनुभयो, हामीले यही बोर्डमा स्वागत गरेका हौं । भारतबाट आईफाको सिइिओ सहित ५,६ जनाको टिमसँग पहिलो चरण हामी बस्यौं । त्यसपछि उहाँहरुको यत्रो ठुलो कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको संलग्नता विना सम्भव छैन भन्ने लागेर हामीहरुले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल ग¥यौं । प्रधानमन्त्रीले फेरि उहाँहरु बाहेक हामीहरुसँग मात्रै पनि भेटघाट गर्नुभयो । पर्यटनको सिइिओ, म, सचिव, अर्थमन्त्री, सुरज बैद्य, भवानी राणा राजेशकाजी श्रेष्ठ लगायत सरोकारवालाहरुसँग प्रधानमन्त्री बस्नुभयो र सम्पूर्ण यथार्थता बुझ्नुभयो । त्यही बेला प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रुपमा अर्थमन्त्रीकै अगाडी भन्नुभएको थियो । ‘सरकारको तर्फबाट सरकारी पैसा एक रुपैया पनि खर्च गर्न हुँदैन, यो कार्यक्रम होस् नहोससँग त्यतिठूलो महत्व राख्दैन । सरकारी पैसा चाँहि खर्च गर्न भएन’ भनेर यो चैतको अन्तिमसाता नै प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्ट रुपमा निर्देशन भइसकेको थियो । सरकारी पैसा खर्च हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गराएपछि ‘पर्यटनबर्ष २०२०’ का संयोजक सुरज वैद्यजीको टीमसँग बिभिन्न विषय र पक्षमा छलफल गरेर सबै कुरा प्रधानमन्त्रीलाई भनिसकेपछि उहाँले ल ठिक छ, त्यसो भए यो अवार्डलाइ अगाडी बढाउनु भनेपछि सैद्धान्तिक सहमति भएको हो ।
सरकारी बजेट खर्च हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स त गराउनुभयो, अनी पर्यटन बोर्ड र काठमाडौं महानगरपालिका सरकारी संस्था हैनन् र ?
सरकारले एक रुपैयाँ कही खर्चगर्ने भनेकै छैन । पर्यटन बोर्डको पैसा भनेको उसको सरकारी आम्दानीको स्रोतबाट एउटा पनि पैसा खर्च हुदैँन भन्ने उसले क्लियर गरिसकेको छ । त्यहाँको सिइओले भनेअनुसार, बोर्डको आम्दानीको स्रोत भनेको प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपको अवधारणामा केही रकम संकलन हुनेरहेछ । पर्यटकहरुबाट आउने रोयल्टी र अन्य स्रोतहरु जुन छ त्यो स्रोत नै उनीहरुले पर्यटन प्रबद्र्धनमै खर्चगर्ने हो । यतिको ठुलो इभेन्ट गर्नुभनेको पर्यटन बोर्डका लागि पनि त अवसर हो । पर्यटन बर्ष ‘२०२०’ को अवसरमा पनि पर्यटन बोर्डले यो अवसर क्यास गर्न खोजेको हो । र आइफाको बाहिरको टे«न्ड हेर्दा कतिपय मुलुकमा पर्यटन बोर्डले नै सपोर्ट गर्नेरहेछ कही महानगरपालिका पनि हुने रहेछ । यो टे«न्ट त हामीले बाहिर गरिरहेका छौ । जस्तो आजै भन्नुहुन्छ भने, अमेरिकामा नेपाल अमेरिका फिल्म फेस्टिबल भइरहेको छ । त्यो जुन ठाउँमा भइरहेको हो, त्यो शहरको मेयर त्यहाँको प्रमुख अतिथी हुनुहुन्छ । त्यहाँका चलचित्रकर्मीहरु सहभागी हुनुहुन्छ । सहयोग त हामीलाई पनि त बाहिर जाँदा भइरहेको छ नी ।
अब यहाँ पर्यटन बोर्ड र महानगरपालिकाले पैसा खर्च गर्नेभयो भन्ने हल्ला चलाइएको छ । उनीहरुले नपुगेको पैसा खर्च गर्ने हो । जुन पर्यटन प्रबद्र्धनका लागी बोर्डले छुटयाएको हुन्छ । प्राइभेट सेक्टरले भोली १५÷२० करोड क्यास दिन्छौ भनेका छन् । अब कामगदै जाँदा केही रकम अभाव भयो भने पर्यटन बोर्ड, महानगरको केही रकम खर्च होला तर त्यसको पनि ग्यारेन्टी भइसकेको छैन । र नेपालले १ अरव रुपैया ला भनेर आइफालाई बोलाएको, निम्ता दिएको त हैन नी ?
कलाकारहरुको प्रतिक्रिया सुन्दा उहाँहरु भन्नुहुन्छ, अरु देशमा आयोजकले नेै लगानी गर्छ रे, हामीले त उल्टै पैसा खर्च गर्नुपर्ने भयो भन्नेपनि छ, के यो सत्य हो ?
आयोजकले अर्कोदेशमा गएर पैसा तिरेरे कार्यक्रम गर्छ भन्नेमा म चाँहि बिस्वस्त छैन । जुन हिसावले उनीहरुको खर्च हुन्छ । कलाकार टेक्निसियनहरु बोकेर हिडनुपर्ने हुन्छ । लगभग ६ सय जनाको टोली बोकेर जान्छ, त्यहाँ गएर त्यहाकँो सरकारलाइ पैसा तिरेर उनीहरु किन जान्छ ? उनीहरुको शहर प्रमोट गर्नुछ । उनीहरुको ठाउँको प्रचारगर्नु छ भने किन आयोजकले लगानी गर्ने ? उल्टो पैसा तिरेको चाँही थाहा छैन । आइफाले पैसा तिरेर गरेको हामीले कहीपनि पाएनौं । हामी नेपालीहरुपनि बाहिर गएर महोत्सव गरिरहेका हुन्छौ । त्यहाँ गएर हामीले पैसा त तिरेको छैन । त्यहीका साथीहरु आयोजकहरुले नै मिलाउने हो, त्यो उनीहरुले म्यानेज गर्ने हो । आइफा अवार्डमा उनीहरुले हल भनेका थिए । हामीले हल दिन सकेनौ । उनीहरुले आफै आएर बनाउने भनेका छन् । बाहिरको टेक्नीसियन ल्याउदा त्यसमा उनीहरुको खर्च होला, आउने गेष्टहरुका लागि होटल एसोसियसनले पनि केही जिम्मा लिन्छ होला । अहिले त वार्ताकै चरणमा त छ नी । मैले बोल्न नचाहेको पनि यही भएर हो की, के के चिज हामीले दिने, के के चिज उनीहरुले गर्ने नै टुंगो भएको छैन । टुंगो नै नभइकन विवाद शुरु भइसक्यो यो टे«न्ड राम्रो होइन ।
नेपाली कलाकारको वास्ता छैन, बाहिरका कलाकारलाई बोलाउन सक्ने हैसियत बनिसकेको छैन, तीन बर्षदेखी राष्ट्रिय नेशनल अवार्ड हुन सकिरहेको छैन भन्दै कलाकारहरु नै बिरोधमा छन् । किन रोकिएको हो नेशनल अवार्ड ?
यो आवाज उठनु स्वभाविक हो । किनभने हामीसँग भएको एउटा हल संसद भवन भएको छ । हामीसँग गर्ने भनिएको राम्रो हल छैन । तर हामीले एउटा विदेशी ठूलो अर्गनाइजरले नेपालमा आएर म एउटा कार्यक्रम गर्छु भन्दा हुदैन नआइज त भन्न सकिन्दैन ? राष्ट्रले कसरी भन्ने ? हाम्रो देशमा हल छैन भन्दा उसले खाली ठाउँमा टे«न्ट लगाएर गर्ने भनिरहेको छ ।
अब नेशनल अवार्ड तीनबर्षदेखि किन भएन भन्दै अहिले बाहिर प्रश्न उठिरहेको छ ? त्यो त हिजोका अध्यक्षहरुको अर्कमन्यताका कारणले भएन । त्यसको जिम्मेवारी राष्ट्रपतिले लिने हो र ? अहिले म आइसकेपछि यो काम अगाडी बढिसकेको छ । यही असारको २७ गते राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा २०७३,७४,७५ को नेशनल अवार्ड वितरण हुँदैछ । राम्रो कामको त प्रचार छैन ? जसले नकारात्मक समाचार फैलाउदै हिड्नु भएको छ । उहाँहरुलाई यो कार्यक्रमको बारेमा जानकारी त थियो खै त प्रचार गरेको गर्न सक्नुभयो त ?
त्यसो हो भने यसमा कलाकारहरुको विरोध किन, के सरकार नै आयोजक बन्यो भनेर मात्रै हो त ?
यसमा अरुहरुले बिरोध गर्नुभएको जस्तो लाग्दैन । हाम्रै कलाकारसाथीहरु नवल खड्का, केपी पाठक लगायतका केही अन्य कलाकारहरु खुलेर लागिरहनुभएको छ । आफुलाई चलचित्रका नेता हौं भन्नुहुन्छ । समाचार भाइरल गराउनु अगाडी चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईलाई एकपटक सोधौन, के रहेछ भन्ने लाग्दैन ? उहाँहरुले चलचित्र क्षेत्रको नकारात्मक प्रचार गर्नु अगाडी बोर्डको अध्यक्षलाई के हो त भन्न पर्यो नी ? म छु त यहाँ, सोध्नपर्छ कि पदैन ? सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस राखिरहेका छन् । चलचित्र क्षेत्रमा राम्रो हुन नदिने क्याम्पेनिङ्गग गर्ने चलचित्र विकास बोर्डले केही राम्रो गर्न खोज्यो कि अगाडी नै बिरोध गर्ने । कार्यक्रम हुने कनफर्म भएको छैन बिरोध शुरु भइसक्यो । हुने कनफर्म भयो भने न मैले कलाकारसाथीहरुसँग बसेर कसरी जाने, के गर्ने , भन्ने बिषयमा छलफल गर्छु ? अब हुनु कहिले हो कहिले, हुने हो की हैन , आयोजकहरुसँग नै कुरा टुंगीएको छैन । अनि चलचित्रकर्मीहरुसँग के भनेर जानकारी गराउने ? हदसम्म पनि कुन हदसम्म भने, राष्ट्रपतिले समय नदिएर नेशनल अवार्ड हुन सकिरहेको छैन भन्ने पनि आरोप लाग्यो । विदेशीलाई १ अरब खन्याएर कार्यक्रम गर्न लाग्यो भन्ने सम्मको अरोप लगाउनु ठिक हो ? नेशनल अवार्ड राष्ट्रपतिको कारणले रोकिएको हो ?
अब सरकार आयोजक बन्यो भन्या छ, सरकार आयोजक भएन भने, यो सेक्युरिटी कस्ले दिन सक्छ ? सरकारले इनिसिएसन दिएन र माथीबाट सरकारले मोनिटरिङ्ग गरिदिएन भने कार्यक्रम सफल हुन्छ ? भारतको एउटा कलाकार सलमान खान आउने कार्यक्रम तीनचोटीसम्म सारेर स्थगित भएको हैन् ? कपिल शर्माले सुरक्षाको दृष्टिकोणले कार्यक्रम गर्न नसकेको हैन ? एकजना कलाकारका लागि त त्यति गाहो भयो भने, यत्रो भारतको दुई तीन सय कलाकार आउने, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन देखि अन्य कलाकार आउने कार्यक्रममा सरकारको संलग्नता भएन भने यसको सेक्युरिटीको ग्यारेन्टी कस्ले लिन्छ ? सरकारले सेक्युरिटीका लागि साथ दिएको हो, पैसाका लागि हैन । सरकारको ढुकुटीबाट एक रुपैया खर्च हुँदैन र यो ठूलो इभेन्ट भएकाले सुरक्षाका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।
आइफा अवार्ड भनेको चाँहि कस्तो अवार्ड हो ?
आइफा अवार्ड भनेको भारतीय एकेडमीको अवार्ड हो । यो अवार्ड बलिउडको अधिकांश ठुला कलाकारले सहभागिता जनाउने अवार्ड हो । यसको ब्राण्ड एम्बास्डर अमिताभ बच्चन हुन । यो अवार्ड उनीहरुले भारतभित्र गदैनन् । सधै देश बाहिर नै गर्ने हो । यसअघि १९ वटा अवार्डहरु उनीहरुले बिभिन्न मुलुकमा गरिसके २० औ अबार्डका लागी उनीहरुले नेपाललाई छानेका हुन । र नेपाललाई छान्नुको कारणपनि सोधेका थियौ । तिमीहरुको भिजिट नेपाल चलिरहेको छ । त्यसले हामीलार्इ पनि केही सहयोग गर्न सक्छौ, हाम्रो कारणले तिमीहरुलाई पनि केही राम्रोहुन सक्छ भन्ने उदेश्यले यो कार्यक्रम गर्न लागिएको हो भन्ने जवाफ दिए ।
आइफा अवार्ड कहिले हुँदैछ ?
यो अगष्टको २५ मा हुने कुरा छ । उनीहरुको अहिलेसम्म सकाउने योजना थियो । व्याक सर्दै सर्दै गईसक्यो ।अहिले आईफा पनि ट्रयाकमा छ । नेपालमा गर्ने भनेर उनीहरुले यतै ट्रार्गेट बनाए । अरुदेशमा गएर गर्नलाई अब उनीहरुसँग समय पनि छैन । त्यही भएर अहिले उनीहरुको शुरु शुरुको डिमान्ड घट्दै गइरहेको छ । नेपालमा पहिलो पटक यति ठुलो इभेन्ट हुन गइरहेको छ । पहिलो पटक हुनेभएकाले सरकारले सैद्धान्तिक सहमति गर्दा नै बिरोध शुरु भएको छ ।
यो इभेन्टगर्दा नेपाललाई के फाइदा हुन्छ, नेपाली रकम विदेश जानेभयो भन्ने गुनासापनि छन् ?
यसले नेपालको पर्यटन विकासलाई प्रत्यक्ष फाईदा गर्छ । त्यसको उदाहरण भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मुस्ताङ्गको भ्रमणलाई हेर्दापनि हुन्छ । जनकपुरमा भारतीयहरुको सहभागिता हेर्नुस् । यसले पर्यटनलाई पछिसम्मका लागि फाइदा गर्छ ।अर्को संसारभरि छरिएका भारतियहरुले यो अवार्डको कार्यक्रम हेरिसकेपछि कुनै होलिडेको मुड बन्यो भने माइन्डमा एकपटक नेपाल त आउछ नी । यो हिजोको अवार्डले पनि देखियो श्रीलंका, सिंगापुर , मलेसियामा अवार्ड भइसकेपछिको मानिसको फ्लो हेर्नुस् । त्यस्तै नेपालको पनि प्रचार त हुन्छ नै, त्यसले पर्यटनमा फाइदा हुने भयो अर्को भनेको राष्टपति ज्युले संसदमा सम्बोधन गर्नुभयो । नेपाललाई एउटा छायांकन डिस्टिनेशनका रुपमा विकास गर्ने भनेर ‘सुटिङ्ग डिस्टिनेशनल अफ नेपाल’ भन्ने नारा त्यो साउनबाट शुरु हुन्छ । त्यसको बजेट सरकारले छुटयाईसकेको छ । हामी फिल्म टुरिजमका लागि पनि काम अगाडी बढाइरहेको छौ । यो अवार्ड नेपालमा हुन सक्यो भने त्यसलाई पनि जोडेर हामी नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय रुपमा चिनाउन सक्छौ ।
अमिताभ बच्चन, सलमान खान संसारको जुनसुकै होटलमा जाँदा को होला की, उनीहरुलाइ ल्याउने आफनो होटलमा बसिदिए हुन्थ्यो , खाइदिए हुन्थ्यो नभन्ने ? उनीहरुलाइ त जसले पनि स्वागत गर्न चाहन्छ नी । हाम्रो त्यो अनुसारको पपुलारिटी हुनुपर्यो नी ? हाम्रो नेपालको चर्चित कलाकार राजेश हमाल बिदेश जाँदा हो की हैन भन्दै हेर्छन् । बाहिर नेपाली कलाकारको पपुलारीटी नै छैन चिन्नै गाहो मान्छन् । जब हामी बाहिर आफू निस्कन सकिरहेको छैनौ, निस्कने बाटो हामी खोज्दैछौ भने, बाहिरबाट आएको चिजलाई शुरुमै ढोका थुनेर हुन्छ ? त्यसले केही न केही नकरात्मक सन्देश नै जान्छ ।
बिरोधका लागी बिरोध गर्नेहरुको त कुनै जवाफ नै छैन । तपाई कुनैपनि कामगर्नुस् तपाईलाई मेरो अनुहार मन परेन भने, मैले जे जे गरेपनी मन पदैन । अब के गर्ने अहिले भएको कन्डिसन त्यही हो ।
पर्यटनबर्ष २०२० लाइ प्रचारगर्न आइफा अवार्डले सपोर्ट हुन्छ भनिएको छ, एकदिनको कार्यक्रमले त्यो कसरी सम्भव हुन्छ ?
त्यो त पर्यटन बोर्डले प्लान बनाएको छ नि । आउने कलाकारहरुलाई कसैलाई चारदिन अगाडी आउन भनेको छ । कसैलाइ सातदिन पहिला बोलाएको छ । उनीहरुलाइ कतिवटा मुख्य ठाउँहरु घुमाउने कार्यक्रम छ । उनीहरुको छायांकन हुन्छ । त्यो त आयोजकले गर्छ नी । पर्यटन बोर्ड, काठमार्डाै महानगरपालिकाले गर्ला । यो भारतको अवार्डभन्दा पनि नेपालको लागी पर्यटन प्रबद्र्धैन नै होे । उनीहरुले कुनै फिल्मको सुटिङ्ग गर्लान् त्यसले नेपाललाइ फाइदा गर्छ, देश चिनाउन । भोली विदेशीहरु नेपाल आउन सक्छन् । अर्को सिनेमा टुरिजमलाई यसले फाइदा गर्छ । अर्को दुइदेश बीचको कलाकारको सम्वन्ध बिस्तारलाई पनि फाइदा पुग्छ । आजभोली भारतीय चलचित्र उद्योगलाई संसारमा नचिन्ने को छ ? उनीहरु यहाँ आएर ठुला ठुला निर्मातासँग मिलेर कामगर्न सक्यौ भने त्यसले त ठुलो फाईदा पुग्छ नी ।
भारतीय कलाकार नेपाल आउँदा नेपाली कलाकारको वास्ता हुँदैन, भारतिय कलाकारलाई चाहिने भन्दा बढि नै महत्व दिइन्छ भन्ने पनि आरोप छ ?
एउटा भारतिय गायक आउदा हाम्रो भएभरका कलाकार हिरोइन कोरसमा नाच्न जान्छन् कीन जाने त ? उनीहरुले आफनो हैसियत राख्न प¥यो । म पनी नेपालको कलाकार हो भन्ने त्यति क्यापासिटि राख्न सक्दैनन् ? आफुले आफ्नै अवमूल्यन गर्ने अनि अरुलाई दोष दिएर हुन्छ ?
को– को आउदै हुनुहुन्छ भारतीय कलाकार के छ तयारी ?
केही टुंगो भएको छैन, अन्धकार छ , कार्यक्रमको टुंगो नै लागेको छैन ।
अवार्ड भएन भने चाँही कस्तो कस्तो असर पर्ला ?
अवार्ड भएन भने देश कै बदनाम हुन्छ ? अहिले हरेक कार्यक्रमको आयोजना गर्छु भन्ने अनि गर्न नसक्दा बेइज्जत हुदैन ? एउटा सलमान खानलाई ल्याएर कार्यक्रम गर्छु भन्ने गर्न नसक्ने, कपिल शर्मालाइ ल्याएर गर्छु भन्ने, गर्न नसक्ने अनि जिटिभिको अवार्ड गर्छु भन्ने गर्न नसक्ने, आइफा अवार्ड गर्ने भन्ने नगर्ने हुँदा देशको के हविगत हुन्छ ?
यदि भयो भने कति जति कलाकार आउनुहुन्छ ?
भयो भने १०० जनाभारतीय कलाकार आउनुहुन्छ । जम्मा उनीहरु ६ सय जना आउने कुरा छ ।
कार्यक्रम चाँही कहाँ गर्ने तयारी छ ?
आर्मी अफिसर क्लबको बाहिर गछौ भनेका छन्, शशस्त्र प्रहरी हलचोक, रंगशाला, सातदोवाटोको रंगशाला देखाएका छौ उनीहरुले ५ हजारजना अटाउने खाली जमिन हेरिरहेका छन् । उनीहरुले ठाउँहेरेर गएका छन् । उनीहरुले आफै स्टेज बनाउने भनेका छन् ।
तपाई चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष भएर आउनुभएको तीन महिना हुन लाग्यो, कलाकारको हितका लागि नयाँ के गदै हुनुहुन्छ ?
यही १८ गते लम्जुङ्गमा २९ सय फिटमाथी १८/२० अरब खर्च गरेर इटालियन कम्पनिले फिल्म सिटि बनाउने तयारी गरिरहेको छ । त्यसलाई इटालियन कम्पनीले लगानी गदैछ हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यो इटालियन टिम आइसकेको छ । अहिले त्यो टिम लमजुङ्गमा छ । हामीले जग्गा उपलब्ध गराइदिने हो । आकाश अधिकारीले त्यसको को–अर्डिनेशन गरिरहनुभएको छ । हलिउडबाट चारपाँच पटक ओस्कार अवार्ड पाउने व्यक्तिले नेपालमा काम शुरुगर्न लागेका छन् ।
हामीले यसपाली श्रमजीवी चलचित्रकर्मी कल्याणकारी योजना अगाडी सारेका छौ । यसलाई कुन तरिकाले लैजाने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ । सुविधा सम्पन्न सुटिङ्ग स्टुडिओ बनाउने जग्गाको खोजिमा छौ । काठमाडौ भक्तपुर ललितपुरमा जग्गा खोज्ने काम भइरहेको छ ।